भर्जिनिया रक्त रक्त क्याप्सूल - VC- गुप्त
भर्जिनियाकेयर रक्त क्याप्सुलहरू
VIRGINIACARE रगत कैप्सूल सुरक्षा को कन्फर्मेसन को लागि।
धेरै बेचियो! तीव्र रक्तस्राव
भर्जिनियाकेयर रक्त क्याप्सूल तपाईंको कुमारीत्व पुष्टि गर्न हाम्रो नवीनता हो। हामीले यो तपाईंलाई १- hours घण्टा पहिले प्रस्ताव गर्ने अवसर दिनको लागि विकसित भएको हो!
योजना बनाएको यौन संभोग भन्दा hours घण्टा सम्म कंगुल रगत पाउडरको साथ औंला-गहिराइ कम्तिमा १-२ अधिकतम the घण्टा सम्म क्याप्सूल घुसाउनुहोस्।
यसमा क्याप्सूल र उच्च-गुणात्मक रक्त पाउडर त्यसपछि पूर्ण रूपमा विघटन हुन्छ। कृत्रिम हाइमेन र रगत क्याप्सुल बीचको फरक मात्र ह्यान्डलि and र अलि लामो समय विन्डो हो। हाइमेनको परिचय समय minutes० मिनेट हो - २ घण्टा र हाइमेन रगतका लागि १- hours घण्टा।
यौन संभोगको क्रममा, यो तपाइँको योनी स्रावसँग मिल्छ र प्राकृतिक मात्रामा रगतको ट्रेलको रूपमा बाहिर जान्छ।
योनी प्रवेश द्वार कडा गरी कुमारीत्व को भावना तीव्र गर्न को लागी, हामी 1-2 हप्ता आवेदन अग्रिम सिफारिस गर्छौं १०० लाई पुनर्जीवित गर्नुहोस्।
यदि तपाईं छोटो अवधिमा समाधान विचार गर्न चाहानुहुन्छ भने, हामी यो प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छौं भर्जिनियाकेयर उन्नत। यो 30० मिनेट प्रयोग गर्नका लागि हो - योजना गरिएको यौन संभोग भन्दा २ घण्टा अघि र हाम्रो कुमारी रगत पाउडरको साथ तपाईको कुंवारीत्वको विश्वसनीयता पुष्टि गर्दछ।
वास्तविक रगतको लागि समान!
रगत पाउडर ओसिलोताको सम्बन्धमा रगत रातो हुन्छ र पूरै विलीन हुन्छ!
सुख्खा ठाउँमा भण्डार गर्नुहोस्।
न्यूनतम शेल्फ जीवन १२ महिना हो।